Izindaba - Yiziphi izinto zamathuluzi wensimbi yokugunda utshani
Yiziphi izinto zokwakha ezenziwa yi- umshini wokugunda utshani unayo? IZhengchida Blade Factory izosenzela ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe.
Okokusebenza kwethuluzi kuyisici esiyisisekelo esinquma ukusebenza kokusika kwethuluzi, elinomthelela omkhulu ekusebenzeni kahle kokusebenza, ikhwalithi yokucubungula, izindleko zokucubungula nokuqina kwethuluzi.
Uma ilukhuni ithuluzi, ithuthukisa ukugqokwa kwayo kokuqina, ukuphakama kobulukhuni, ukwehla kobulukhuni bomthelela, kanye nokuqina kakhulu kokuqukethwe. Ubulukhuni nobulukhuni kuyizinto ezimbili eziphikisanayo, futhi futhi kuyisihluthulelo okufanele isisetshenziswa sethuluzi lisinqobe. Kumathuluzi we-graphite, ukugqokiswa okujwayelekile kwe-TiAIN kungakhethwa ngokufanele ekukhetheni kwezinto ezinobulukhuni obungcono, okungukuthi, okuqukethwe kwe-cobalt kuphakeme kancane; yamathuluzi we-graphite eboshwe ngedayimane, ubulukhuni bungakhethwa ngokufanele ekukhetheni izinto zokwakha. , Okusho ukuthi, okuqukethwe kwe-cobalt kuncane kancane. Isingeniso esinemininingwane mayelana izindwani zokugunda utshani
Mower izindwani kungenziwa egcizelele imininingwane
Ukusetshenziswa kwensimbi yokugunda utshani: kusetshenziselwa ukusika izimbali zensimu nezihlahlana ezincane zobubanzi nezinye izinto Umshini wokugunda utshani Imishini esebenzayo: umshini wokusika ibhulashi, umshini wokugunda utshani, umshini wokugunda utshani
Izindwangu zokugunda utshani zikulungele ukusika izinto zokwakha: imingcele yensimu, amanzi nezinsimu ezomile, utshani, imigwaqo yasemgwaqweni, ukhula lolwandle lomfula, izindwani zokugunda utshani, izihlahlana ezincane zobubanzi, uqalo oluncane, uthango
Isakhiwo nokusebenza komshini wokugunda utshani kagesi
Umshini wokugunda utshani: Umshini wokuvuna izifuba osika amadlelo noma ezinye izitshalo ezingenziwa ifulawa bese ubeka phansi. Kunezinhlobo ezimbili zokuphindisela nokujikeleza. Ukuphindisela emuva umshini wokugunda utshani: Ukuthembela ekunyakazeni okuhlobene nokugunda kommese ohambayo kanye nommese ohleliwe kusika ukusika ifolishi. Isici sayo ukuthi indiza yokusika ihlanzekile, amandla adingekayo ngeyunithi ngayinye yokusika ububanzi mancane, kepha ukuzivumelanisa nezimo zokukhula ezihlukene zefulawa kubi, futhi kulula ukuvimba. Ifanele utshani bemvelo obuyisicaba kanye notshani bokufakelwa obunemikhiqizo ejwayelekile. Ngenxa yokudlidliza okukhulu komsiki ngesikhathi sokusebenza, ukwanda kwejubane lokusebenza kunqunyelwe. Ijubane lokusika lommese ohambayo ngokuvamile liphansi kune-3 m / s. Isivinini esiphambili sokusebenza ngokuvamile singama-68 km / h. Umshini wokugunda utshani ogandaganda: isakhiwo esilula, ukukhanya, ukuguquguquka nokuguquguquka. Kunezinhlobo ezintathu zokumiswa ngaphambili, ukumiswa kohlangothi nokumiswa kwangemuva. Kamuva ukumiswa kwama-mowers yizona ezisetshenziswa kakhulu.
Kulungile, ake sethule izindwani eziningi kangaka zokugunda utshani.
I-Zhengchida igxile ekukhiqizeni izindwani zokugunda utshani, wamukelekile ukwenza ngezifiso nokuthenga!
Isikhathi sokuthumela: Mar-15-2021